Komiti yeDare reSeneti Yonzwa Zvipingaidzo Zviri muCABS Youth Fund
WASHINGTON DC — Mamwe masangano anomirira vechidiki munyika anoti zvinodiwa kuti vechidiki vari kukumbira rubatsiro rwemari kubva kuhomwe yemari inobatsira vechidiki iri pasi pebhanga reCABS, kana kuti CABS Youth Fund, ndizvo zviri kuita kuti vechidiki vakawanda vaore mwoyo, varege zvavo kuzvinetsa nekuedza kutsvaga rubatsiro.
Mashoko emasangano aya anotevera huchapupu hwapiwa kukomiti yedare reseneti inoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema, nemukuru ari kuona nezvehomwe iyi mubhanga reCABS, VaBrian Mpofu, ekuti vechidiki havasi kuforera mari iri muhomwe iyi.
VaMpofu vanotiwo pavashoma vakanyorera, vechirume ndivo vane chitsama chinosvika zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvichienzaniswa nevechidzimai vanongosvika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana.
Mukuru uyu anoti vechidiki vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana matatu ndivo chete vakanyorera kuti vaedze kuwana rubatsiro kubva kuhomwe iyi.
VaMpofu vanotiwo vechidiki zviuru zvitatu nemazana mashanu ndivo chete vakakwanisa kuwana rubatsiro rwemari inosvika $2.7 million.
VaMpofu vaudzawo komiti iyi kuti vechidiki vanoda kuti vadzidziswe nzira dzekunyora magwaro ekukumbira mari.
Vanotiwo pakatanga chirongwa ichi, CABS yakapa bazi rezvevechidiki mari inoita miriyoni imwe chete yemadhora yekushandisa mukudzidzisa vechidiki vanoda kupinda muzvirongwa zvakadai, uye vanhukadzi vashoma ndivo vari kukumbira mari iyi.
Mukuru wesangano revechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, VaSydney Chisi, vanoti vechidiki vakawanda havasi kupiwa mukana wekuwana dzidziso iri kutaurwa nezvayo iyi uye vachiri kusangana nezvimhingamipinyi zvakawanda.
Vanotiwo chimwe chiri kunetsa vechidiki ava ndechekuti hapana ruzivo rwekuti sei chirongwa ichi chakaumbwa, uye kuti chinofanirwa kubatsira ani.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remadzimai echidiki, reInstitute for Young Women Development, Muzvare Glanis Changachirere, vanotiwo nhengo dzavo dzichiri kusangana nematambudziko akawanda ari kudzitadzisa kusvikira mari iyi.
Vanoti matambudziko anonyanyosangana nemadzimai anosanganisira kusawana dzidziso yakakwana pakunyorwa kwemagwaro anovatsigira pakutsvaga rubatsiro, nekusave neruzivo pakuzadzisa mafomu ekubhanga, nezvimwe zvakadaro.
Muzvare Changachirere vanotiwo sangano ravo harisi kuzokwanisawo kubatsira nhengo dzaro kusvika kumagumo sezvo risiri kuwana rutsigiro kubva kune vakuru mubazi rezvevechidiki kana kubhanga.
Hurukuro naVaSydney Chisi pamwe naMuzvare Glanis Changachirere